အာရုံဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာများနှင့်ပုဂ္ဂလဒိsexual္လိင်ဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုများအကြားပြဌာန်းနှုန်းနှုန်းများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုများ (2016) - Your Brain On Porn
Psychophysiology ။ 2016 သြဂုတ်; 53(8): 1272-81 ။ Doi: 10.1111 / psyp.12661 ။ EPub 2016 ဧပြီ 29 ။
အိုလီဗာ TL1, Meana M က1, Snyder JS1.
အများကြီးသုတေသနယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ထက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်လိင်အင်္ဂါလိင်စိတ်နိုးထအကြားတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောမာတိကာပြသဖော်ပြသည်။ ကျနော်တို့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ဦးနှောက်ကို Activation အကြားဆက်ဆံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေး။ 1 သင်တန်းသားများကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် Non-ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအားပေးစဉ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အာရုံ N3 နှင့် P38b ERP amplitude တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။ အများစုကအထူးသ, သူတပါးအတွက် N1 လွှဲခွင်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိ၏ အမြိုးသမီးမြားအဘို့, P3b လွှဲခွင်နှင့်လိင်စိတ်နိုးထအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိ၏။ ERP amplitude ပြောင်းပြန်လိင်စိတ်နိုးထယောက်ျားများအတွက်အစောပိုင်းသေံအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မိန်းမတို့အဘို့အကြာတွင်သေံအပြောင်းအလဲနဲ့နှောင့်ယှက်အကြံပြုခြင်း, အစီရင်ခံစာများ arousal နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့, အမျိုးသမီးအဘို့, ညစ်ညမ်း / erotica စားသုံးမှုအဆိုးကိုပိုမိုညစ်ညမ်း / erotica လောင်သောမိန်းမတို့လည်းခေါ်ဆောင်သွားဇာတ်ကားတွေပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြသအံ့သောငှါအကြံပြုခြင်း, P3b amplitude ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
ERPs; ကျား, မ, N1; P3; လိင်စိတ်နိုးထ
10.1111 / psyp.12661
[PubMed - လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်]